10 isingakanganwike SummerSlam gimmick machisi - Wwe
10 isingakanganwike SummerSlam gimmick machisi
# 9 Nexus vs. Chikwata WWE - 7-on-7 Kubvisa Tag Chikwata Match - SummerSlam 2010
Nexus vs. Team WWE paZhizhaSlam 2010
Uyu ndiwo mugumo weSummerSlam uyo waifanira kunge wakaenda neimwe nzira. MunaJune 2010, iyo Nexus yakaita yavo yekutanga pane huru roster, vachirwisa zvese zvinoonekwa panguva yechiitiko chikuru cheRaw. Ivo vakakumbira zvakavimbiswa zvibvumirano zveWWE. Iboka racho raive nemasere NXT rookies, anosanganisira Wade Barrett, Heath Slater, naDarren Young.
Nexus yakatarisana naJohn Cena uye vakatomupa nzvimbo muboka ravo, izvo zvaakaramba. Pakupedzisira, takaona timu yeWWE superstars rally yakatenderedza kusangana nevanhu vatsva paSummerSlam.
Yaive Chikwata WWE chakatora kukunda, asi vateveri vataura kuti yaifanira kunge iri Nexus iyo yaifanira kunge ichiti yakunda. Wanga uri iwo musoro wehurukuro kwemakore kubva chiitiko ichi chaitika.
Vakanyatsodonha bhora neiyi.
Uye ini ndichiri kutenda kuti Nexus inofanirwa kunge yakakunda paZhizhaSlam! pic.twitter.com/YAFaQjwrRu
- Wrestling Jebus (@WrestlingJebus) Chikumi 7, 2021
John Cena akakurukura mutambo weSummerSlam panguva ya Q&A muAustralia muna 2017:
'Iyi yanga iri nyaya yekukakavadzana pakati pevadi vechokwadi veWWE mafeni kwenguva yakati rebei nekuti ndiwo manzwiro avo andinofanira kunge ndakarasa iwo mutambo. Sei ndakahwina mutambo iwoyo? Nekuti ndizvo zvatakaita. Zvakaoma kwandiri kuti ndisanzwisise mitsara pane izvi… asi ndinoratidza kushanda uye ndinoita zvandinoudzwa. Ndichakupa kugutsikana kweizvi: Ini handitore kuti nyaya yacho inotaurwa sei, ndinoudzwa izvozvo. Asi ini ndinonhonga zvinoenderera murungano. ' John Cena akati (h / t Wrestling INC)
# 8 Dombo vs. katatu H - Matanho Matanho - ZhizhaSlam 1998
Dombo vs. Triple H muMatanho Matanho paZhizhaSlam 1998
Ivo vaviri vasati vava megastars, Triple H uye The Rock vakawirana paSummarSlam 1998. Mutambo wacho pachawo waive Manera Matanho neThe Rock achidzivirira Intercontinental Championship yake.
Ivo vaviri vaive chikamu chemapoka avo. Dombo raive nhengo yeRudzi rwekutonga uye Triple H yaive chikamu cheD-Generation-X. Vaviri vakagadzirisa zvibodzwa, Mutambo uchiuya pamusoro kuhwina Intercontinental Championship. Izvo zvaive zvisina gakava sezvo Chyna, imwe nhengo yeDX, akapinda mukubatsira Triple H kutora kuhwina.
Changu chandinofarira ndeichi @TripleH V @Dombo paSummerslam 98 .. Ini ndakanga ndatenga iyo VHS uye uyu wanga uri mumwe wemitambo iyo yakasimbisa fandom yangu. HHH anga ari wandinofarira wrestler kubva ipapo. pic.twitter.com/pBeJGuPzKC
- Craig Jaggs (@craigjaggs) Nyamavhuvhu 8, 2021
Mutambo wacho pachawo wakadzika seimwe yemitambo yakanakisa munhoroondo yeSummerSlam. Icharangarirwa semutambo wakaratidza zvaigona kuitwa nevarume vese vasati varova stardom kungori gore kana kuti gare gare.
# 7 Kubvisa Chamber Mechi - ZhizhaSlam 2003
Goldberg achitora pasi Chris Jericho naShawn Michaels mukati meKubvisa Chamber
Mutambo wechipiri-wakazobviswa weKubvisa Chamber wakaitika paSummerSlam pay-per-view muna 2003. Yairatidza mutsetse une nyeredzi unosanganisira Triple H, Goldberg, Shawn Michaels, Chris Jericho, Kevin Nash, naRandy Orton.
Triple H ndiye aidzivirira World Heavyweight Champion muChamber uye akabuda pamusoro nekutenda kubatsirwa kubva kuEvolution timu yaaishanda naye Ric Flair. Flair yakapasa Triple H sledgehammer kunonoka mumutambo wekushandisa paGoldberg. Mushure mekupera, Evolution akarwisa zvine utsinye Goldberg, uyo akamisikidza ruvengo rweTriple H-Goldberg kwemwedzi inotevera.
11 makore apfuura nhasi, @TripleH akahwina mutambo wechipiri yekubvisa mukamuri pa #SummerSlam 2003 kuchengetedza iyo WHC. pic.twitter.com/Kf8ZjNOl5y
- ThatDamnGood (@TeamTripleH_) Nyamavhuvhu 24, 2014
Mutambo wacho pachawo waive uzere nekuita. Panguva iyoyo, girazi raishandiswa pamusuwo wekamuri raive rakakosha kune girazi chairo, saka rakapwanya sekunge raive chairo. Yakagadzirirwa dzimwe nguva dzinoshamisa, kunyanya apo Goldberg paakarova Chris Jericho kuburikidza nayo.
KUMASHURE MBERI 2/4 ZVINOTEVERA
ine markiplier ine musikana 2017
ndinoda rugare rwepfungwa
ndinoda kuwedzera girly
sei kuva empath yakasimba
Ndingaziva sei kana ndichida mumwe munhu
kuwira murume akaroora anotora mazwi